[Ukara] Wondershare MePub: Mepụta EPUB eBooks
A Mfe Ma Dị Ike EPUB Onye Okike
Ọsọ ọsọ na mfe n'ihi na ị na ike gị nkecha EPUB eBooks na gị Mac.
Arụ ọrụ dị ukwuu a n'ezie na oge nchekwa site na ihe m na-eme tupu m zụrụ MePub.
- Ron Schmidli
Nke a bụ zuru okè n'ihi na ndị na-kpamkpam furu efu mgbe ọ na-abịa na-eke eBooks (dị ka m bụ) ọ \_ 's mfe ma dị mfe iji na uru ọ bụla pasent nke $ 40 ịzụta ya, ọ bụrụ na ị \_' re a mbido onye kwesịrị a obere enyemaka mgbe ahụ na nke a bụ maka gị!
M \_ sitụrụla gbalịrị free ikpe version. ọ bụghị ezi EPUB-ewu ihe. Ọ bụ nnọọ mfe ma na-enye ọ dịghị maa mma ndebiri. Emechu ihu!
M zụtara otu obere nwa m nwanyị iji tọghata ya edetu ka EPUB format nke na-edebe. Nice ~
M \_ sitụrụla ji ya wuoro EPUB eBooks. Ọ na-eme na-eke EPUB eBooks otú mfe!
M ji ya mbubata ọtụtụ PDF faịlụ na mere a nnukwu EPUB ebook m iPod aka. Ọ dị mma inyeaka.
Ọ dị mma EPUB Onye Okike na-amasị m nke ukwuu.
Egwu. O nyeere ike m EPUB ebook ọma. Ugbu a, m \_ sitụrụla etinye EPUB na blog maka òkè.
Nye m, ọ bụ ngwá ọrụ nke DIY ndị \_ 's onwe EPUB eBooks.
- Mara mma
Ọ dị mfe na ngwa na-adabara beginners.
Ntak emi Họrọ MePub?
Wondershare MePub, A dị mfe ma dị ike EPUB ebook Okike, iji nye ọrụ ndị kacha ngwọta na-ewu EPUB eBooks. Ọ ike ịmepụta EPUB ebook si ruo 100 faịlụ ngwa ngwa na oge. Na Ọzọkwa, ọ na-enye ọrụ iji hazie akwụkwọ mkpuchite, Ama, okirikiri nhọrọ ukwuu, tebụl nke ọdịnaya, wdg na-enye ọrụ ohere ịmepụta ha nkecha akwụkwọ. Mgbe eke EPUB eBooks, ọrụ ike na-ebipụta akwụkwọ ndị a ha weebụsaịtị maka nkekọrịta ma ọ bụ nyefe iPad, iPod aka, iPhone (iPhone 5 gụnyere) maka ịgụ na ọ laa.
Mepụta EPUB eBooks si Popular Documents
Mee EPUB eBooks si MS Okwu (.doc / .docx), PDF (.pdf), Text (.txt), HTML (.HTML / .htm), CHM (.chm), Images (.jpg / .bmp /. PNG / .tiff / .gif).
Chebe mbụ akwụkwọ ederede, na ogidi, tebụl, ihe oyiyi, ndịna-emeputa, hyperlinks, na okirikiri nhọrọ ukwuu na mmepụta EPUB eBooks.
Hazie gị New eBooks
Họrọ eserese site na kọmputa gị dị ka akwụkwọ cover.
Hazie akwụkwọ Ama, okirikiri nhọrọ ukwuu na tebụl nke ọdịnaya.
Mepụta EPUB ebook rụọ ọrụ nke ọma
Tọghata a 500-na peeji akwụkwọ ihe EPUB ebook na-erughị 1 nkeji.
Tinye ruo 100 faịlụ n'ime ihe EPUB ebook na oge.
Nkwado ezoro ezo PDF Files
Nkwado converting PDF faịlụ na-echebe site Iṅomi na-ebi akwụkwọ na-EPUB eBooks.
Akwado azọpụta Open paswọọdụ echebe PDF dị ka EPUB ebook na ikike paswọọdụ.
Mee EPUB eBooks site na ndị ọzọ formats na ole na ole clicks.
Na-akwado na-azọpụta faịlụ na English, French, German, Italian, Portuguese, Spanish, Korean, Japanese, na Chinese dị ka EPUB eBooks.
Gịnị bụ eru nke PDF ngwá ọrụ ikpe mbipute?
Olee otú iji tọghata eBooks ka EPUB Format
Wepụ paswọọdụ echebe na PDF Iṅomi, edezi na-ebi akwụkwọ, na-eme ya free iji PDF faịlụ. Mụtakwuo
Tọghata PDF faịlụ ka otutu ewu ewu akwụkwọ formats, gụnyere Microsoft Okwu, Excel, PowerPoint, na ndị ọzọ. Mụtakwuo
Gị niile-na-otu PDF ngwọta. Mepụta, dezie, tọghata, annotate, chebe, jikota, watermark, mpikota onu, na banye ụlọ ọrụ ọkọlọtọ PDF faịlụ. Mụtakwuo